On ya ahịa blog, Robert Weller chịkọtara 10 isi iche n'etiti kpochapụwo na-elekọta mmadụ media ahịa si Thomas Schenke akwụkwọ Social Media Marketing und Recht na a infographic. Ndepụta a sara mbara, na-enye uru nke ọsọ, usoro, ịdịgide adịgide, nyiwe, iwu, ntuziaka, na agwa mmekọrịta. E nwere ọtụtụ ndị nduzi azụmaahịa ọdịnala na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụbọchị ndị a ka na-amataghị ọdịiche dị iche iche ma ọ bụ ghọta uru dị na ya - olile anya na ozi ihe omuma a na-enyere aka kọwaa isi
Anyị hụrụ SeanieMic n'anya, onye na-edekọ ụda egwu nke na-eme ọtụtụ mkpọ egwu. Egwu ya emeela ka ọ banye na weebụ niile, yabụ anyị gwara ya ka ọ gbụọ ya ụtọ maka akwụkwọ anyị, Corporate Blogging for Dummies. Seanie kpọgidere ya! N’enyeghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị naanị akwụkwọ nke aka ya, anyị zụlitere biya ma ụbọchị ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị nwere ọmarịcha akwụkwọ! Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-ahụ nke a n'anya…